laacibfm.com » Khibraddiisa Tababarenimo, Kulankii Uu Messi La Qaatay Iyo Waxa Kasta Oo Aad Uga Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Tababaraha Cusub Ee Barcelona
Khibraddiisa Tababarenimo, Kulankii Uu Messi La Qaatay Iyo Waxa Kasta Oo Aad Uga Baahan Tahay Inaad Ka Ogaato Tababaraha Cusub Ee Barcelona
Barcelona ayaa xalay ku dhawaaqday inay shaqadii ka caydhisay tababaraheedii Ernesto Valverde, waxaanay beddelkiisa u magacowday Quique Setien oo heshiis sannad iyo badh ah qalinka ku duugay.
Tababaraha cusub ee Barcelona, Quique Setien waa 61 jir u dhashay waddanka Spain oo waqtigii uu ciyaartoyga ahaaa ka dheeli jiray khadka dhexe, waxaanu usoo ciyaaray kooxaha Racing Santantander, Atletico Madrid, Logrones iyo Levante.
Sannadkii 2001 ayuu bilaabay shaqadiisa tababarenimo, waxaanu ku bilaabay kooxdii uu u ciyaari jiray ee Racing Santandar oo uu hal xili ciyaareed oo kaliya maamulay, waxaanu u dhaafay kooxaha Poli Ejido, xulka qaranka Equatorial Guinea, Logrones, Lugo, Las Palmas, Real Betis iyo hadda oo uu Barcelona ka degay.
War-saxaafadeed kasoo baxay Barcelona xalay saqdii dhexe ayaa waxa lagu shaaciyey inuu yahay macallinka hoggaamin doona naadiga ee ku fadhiisan doona kursigii tababarihii hore ee reer Spain ee Ernesto Valverde, waxaana bayaanka lagu yidhi: “Barcelona iyo Quique Setien waxay gaadheen heshiis uu ku noqonayo tababaraha kooxda koowaad illaa 30 June, 2022.”
Quique Setine, waxa uu laba jeer la kulmay laacibka Barcelona ee Lionel Messi, waxaana uu layaabay haybadda ciyaareed iyo mucjisooyinka uu garoomada kusoo bandhigayo taas oo ay u dheer tahay inuu si dhow u ogaaday shaqsiyadda kabtanka kooxda uu hadda yimid.
Markii ugu horreysay ee uu la kulmay, waxay ahayd xilligii tababare Pep Guardiola uu joogay Barcelona, waxaana lagu casuumay xarunta tababarka oo uu ka socday carbiska maalinlaha ah ee caadiga ah, waxaana uu waqti kooban la qaatay ciyaaryahannada Barcelona.
Hadal uu waqtigaas saxaafadda u sheegay ayaa waxa uu ku yidhi: “Malin waxa garoonka tababarka igu casuumay Guardiola, waxaanan fursad u helay inaan daawado Messi oo ku tababaranaya garoonka gudihiisa. Waan u tegay, waxaanan u sheegay inuu sii wado ciyaaraha illaa uu 60 jir ka gaadhayo, ama ugu yaraan inta anigu aan dhimanayo.”
Mar labaadkii uu Messi la kulmay waxay ahayd sannadkii 2016 oo kulan ka tirsanaa horyaalka LaLiga ay iskaga hor yimaaddeen kooxdiisii hore ee Las Palmas, waxaana ciyaartaas 4-1 ku adkaatay Barcelona.
Markii kulankaasi dhamaatay Quique waxa uu u tegay Messi oo uu xabbadka geliyey, waqti koobanna uu la sheekaystay ka hor intii aanay garoonka ka bixin.